Koofiyad Cas waxay bixisaa Lacag-bixin Bilaash ah oo loogu talagalay Horumarinta | Laga soo bilaabo Linux
Qaybinta caanka ah Red Hat, oo loo yaqaan inuu yahay nidaam hawlgal oo aad u adag oo nabadgelyo leh oo ku saabsan heerka ganacsiga iyo ilaha furan, wuxuu noo keenayaa war cusub oo loogu talagalay faa'iidada horumariyeyaasha munaasabaddan; loogu talagalay Red Hat Enterprise Linux rukunka ay codsadeen horumariyayaashu ma soo bandhigi doonaan kharashyada. Tan, si kor loogu qaado shaqada horumariyeyaasha kaladuwan ee ku hoos shaqeynaya magaca il furan, iyo markooda, maxaa yeelay Suunka 'Red Hat Enterprise Developer Suite' wuxuu bixiyaa barxad aad u adag oo xasilloon oo loogu talagalay horumarinta fidinta ujeedooyinka ganacsiga. Dhammaantood oo leh taageerada daruurta, konteenarrada iyo kaabayaasha casriga ah.
Marka laga hadlayo helitaanka, waxaan leenahay Red Hat Enterprise Linux iyo Red Hat JBoss Middleware rukunka bilaashka ah. Isticmaaluhu wuxuu lahaan doonaa teknoolojiyadaan gacanta sida qalab loogu talagalay horumarinta mashaariic kala duwan, oo ka bilaabma tijaabinta ilaa xal u helista xaaladaha kala duwan ee uu soo saarey soosaaraha. Dhammaantood leh amniga iyo taageerada ay bixiso mid kasta oo ka mid ah qalabka wax lagu qaybinayo.
Red Hat oo ah nidaam shirkadeed kaas oo ku saleysan abuurista jawi shaqo oo nabdoon, fududeynta marin u helka waxyaabaha, ilaha badan iyo agabyada oo had iyo jeer ay ku jiraan buugga cusub ee maaddada shaqada ee loo yaqaan 'Red Hat'. Hadda waxaa lagu soo daray buuggan helitaanka Red Hat Enterprise Linux Developer Suite oo lagu daray Red Hat JBoss Middleware. Sidii aan horeyba u sheegnay, waxay diyaar u yihiin inay bilaash ku iibsadaan horumariyayaashu. Waxaa xusid mudan in la xasuusto in qalabkani uu kaliya daboolayo abuurista codsiyada meheraddeed ee asalka ah iyada oo aan la siinin taageero shaqsi ahaaneed iyo xaaladda u adeegsiga si gaar ah bey'adaha horumarka (looma isticmaali karo jawi wax soo saar), u isticmaalkooda ujeeddooyin kale ayaa la aasaasi doonaa oo keliya haddii aad fuliso bixinta rukunka.
Nooca ugu dambeeya ee Red Hat Enterprise Linux Server wuxuu bixiyaa horumarinta codsiyada aaladaha teknolojiyaddii ugu dambeysay, waana lagu maareeyaa hoosta taageerada daruur isku dhafan. Jawiga ka fudud ee la isticmaali karo ayaa la aasaasay, iyada oo ay ugu wacan tahay barnaamijka oo hagaajinaya la jaanqaadkiisa isticmaalka teknoolojiyada sida CI / CD iyo DevOps kooxaha IT.
Ka mid ah qalabyada ay ku jiraan kuwa horumariya, waxaan leenahay qalab loogu talagalay abuurista microservices iyo codsiyada daruuraha, waxay u dhaxeysaa marin u helid Qalabka Kobcinta Koofiyadaha Cas (CDK); halkaas oo isticmaaluhu awood u yeelan doono inuu galo barnaamijka 'Red Hat Enterprise Linux server' oo lagu daray barxad maxalli ah oo ah Shirkadda OpenShift, oo bixisa suurtagalnimada qaabeynta horumarsan, ee abuurista codsiyada ku saleysan weelka. Marka lagu daro adeegsiga ilaha loogu talagalay horumarinta konteenarada iyo aaladaha loo yaqaan Red Hat.
Si gaar ah, Adeegga Horumarinta Red Hat wuxuu bixiyaa qaybo kala duwan oo taageeri doona isticmaalaha hawshooda abuurista codsiyada. Ka bilaabida aaladaha horumarinta ee leh taageerada muddada-dheer; Qalabkani wuxuu ka kooban yahay a taageero 10 sano ah, taasoo u dhacda si la mid ah Ruby, Python iyo OpenJDK 8. Waxaa sidoo kale jira warar isdaba joog ah oo ku saabsan qalabka horumarinta; Qalabkani wuxuu ka kooban yahay habka cusbooneysiinta sanadlaha ah, oo ka bilaabma keydadka macluumaadka, kala duwan sarbeebaha barnaamijka, illaa iyo server-yada. Had iyo jeer cusbooneysii nooca ugu dambeeya uguna deggan ee Red Hat. Faa'iido u ah isticmaalka barxadda, Red Hat Enterprise Linux Server ayaa sida muuqata sidoo kale lagu soo daray xuquuqda isticmaaleyaasha, dhammaantoodna waxay leeyihiin aasaas, laakiin ujeeddo muhiim ah oo kor loogu qaadayo bulshada horumariyaha.
Red Hat ma aha oo kaliya inuu wado sahaminta tikniyoolajiyadeeda, wuxuu kaloo caawiyaa kuwa abuuraya oo raadinaya xalalka mashaariicda kala duwan, iyagoo la shaqeynaya mid ka mid ah nidaamyada ganacsi ee ugu amniga badan. Haddii aad tahay horumariye hore u soco, iskuna day tan beddelka ah.
Visita horumariya.redhat.com para empezar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Red Hat waxay bixisaa lacag la’aan bilaash ah oo loogu talagalay horumariyeyaasha
Waad ku mahadsan tahay maqaalka, ka dib xiriiriyaha, waxaan helay macluumaad iyo macluumaad dheeraad ah oo intaa ka sii badan, aadna loogu taliyay !!.
Ujawaab Carlos Reyes